Octoprint: tonga yako 3D printer kure | hardware yemahara
Octoprint: tonga yako 3D printer kure
Isaac | | 3D kudhinda, Raspberry Pi
Kana iwe uchida iyo 3D kudhinda, chokwadi ungada kuziva zvakawanda nezvazvo iyo octoprint chirongwa. Iyo inoshanda yakavhurika sosi software yekudzora kure yeaya ekuwedzera ekugadzira michina. Nerudzi urwu rwechirongwa iwe unowana yakapusa uye intuitive manejimendi, kuti uwane mhedzisiro iri nani mumapurojekiti ako. Imwezve inozadzisa zvirongwa zvako CAD dhizaini y mamwe mapurogiramu anodiwa yerudzi urwu rwematatu-dimensional kudhinda.
1 Chii chinonzi Octoprint?
1.1 Zvimiro zvesoftware iyi
2 Mapulagi eOctoprint
2.1 Maitiro ekuisa plugin
Chii chinonzi Octoprint?
OctoPrint ndeyemahara uye yakavhurika sosi application kukwanisa kudzora 3D printer. Mugadziri wayo anonzi Gina Häußge, akashandisa yake yekudzora kodhi kune yake 3D printer. Asi chirongwa ichi chaiita sechinonakidza uye mugadziri weSpanish BQ akakwezvwa, achipa mari yekusimudzira kuti OctoPrint ive zvayave nhasi: imwe yeakanakisa software yechishandiso ichi uye inoshandiswa pasi rese.
Nayo unogona gadzirisa zvese zvinodhinda zviri kure uye zvinodzorwapasina chikonzero chekuvapo. Uye zvakare, intuitive uye yakapusa, ine webhu interface iyo iwe unongoda kubatanidza mudziyo kubva chero kwaunoda kudzora kune yemuno network.
Uye haugone kungotumira zvinodzora kune imwechete 3D printer, kana uine akati wandei pamambure unogona kuzvibata zvese. Semuenzaniso, kutumira akati wandei Gcode mafaera nechepakati. Uye chinhu chakanaka ndechekuti inogona kuiswa pamushini wakaderera-resource, kunyangwe paRaspberry Pi SBC. Ndiyo sarudzo inofarirwa nevazhinji vashandisi. Ungofanire kushandisa iyo OctoPi package iripo.
Kana izvo zvisina kukukwanira iwe, OctoPrint inogona zvakare kupa mamwe maficha, senge tarisa kushanda kweprinta uchishandisa makamera munguva chaiyo kuziva kuti kudhinda kuri kufamba sei uye kuona kure kure kuti zvese zviri kushanda nemazvo.
Rumwe ruzivo uye kurodha kubva kuOctoprint - Peji yeprojekiti yepamutemo
Zvimiro zvesoftware iyi
Zvino zvaunoziva nezve OctoPrint, iwe unofanirwa kuziva kuti chii mainini uye mabhenefiti aunofanirwa kushandisa software iyi kudzora maprinta ako e3D:
Yakazara kutonga kwe 3D printer kure.
Kugona kuronda basa nekutarisa.
Inogona kupa data kubva kune tembiricha sensors.
Iwe unogona kugadzirisa ma parameter kana iwe uchiona zvichidikanwa.
Tanga kudhinda kuburikidza neWiFi, pamwe nekumbomira kana kuimisa kana paine zvisizvo.
Kucheka software inoshanda uchishandisa iyo Cura injini (CuraEngine).
Laminator iyo inokutendera kuti ucheke iyo 3D modhi nenzira kwayo, mumatanho.
Gadzirisa yako slicer uye gadzirisa sezvaunoda.
Kuenderana nevakawanda FDM mhando extrusion 3D maprinta. Kunyanya neFlashForge.
Muchinjikwa-chikuva (Linux, Windows, macOS, uye Raspberry Pi).
Nharaunda huru yebudiriro yekuivandudza uye kuwana rubatsiro kana zvichidikanwa.
Modular, nekugona kuwedzera mashandiro ekutenda kune plugins.
Sezvandambotaura, OctoPrint is a modular software inotsigira plugins kuwedzera mabasa akakosha eiyi software. The inonyanya kunakidza plugins zvauinazvo ndezvi:
octolapse: iplugin yeOctoprint iyo inokutendera iwe kutora mifananidzo panguva yekudhinda yezvimedu. Saka iwe unogona kuzvishandisa kumavhidhiyo, tutorials, kurekodha maitirwo awakaita, nezvimwe. Mukuwedzera, hapana nguva iyo musoro wekudhinda unooneka, chikamu chete, nemigumisiro inofadza zvechokwadi.
Firmware Kugadziridza: Iyi imwe plugin, sezita rayo rinoratidza, inokubvumira kuti ugadzirise zviri nyore firmware ye 3D printer. Nokuda kweizvi, iyo firmware inofanira kunge isati yaumbwa, uye ine tsigiro yeAtmega1280, Atmega 1284p, Atmega2560 uye Arduino DUE processors.
Fullscreen Webcam: Iyi imwe plugin yeOctoPrint inoshandiswa kukwanisa kuona vhidhiyo yekudhinda munguva chaiyo mune yakazara skrini. Chimwe chinhu icho base software haigone kuita. Inogona zvakare kuratidza ruzivo rwepamusoro pachiratidziro, senge nguva yekudhinda, tembiricha, nezvimwe.
Webcam Streamer: Iyi imwe plugin inobvumidza iwe kuratidza iyo 3D yekudhinda maitiro kune ani nani waunoda, kuburikidza nekushambadzira. Inobatsira kwazvo kutepfenyura mhenyu pamapuratifomu seTwitch kana YouTube Live.
Octoprint Chero kupi: chimwe ichi chinokubvumira kushandisa software uri kure, kubva kune chero nharembozha kuti ukwanise kuona mamiriro eiyo 3D printer. Semuenzaniso, iwe unozogona kuona iyo webcam pane nharembozha yako, tembiricha, chaiyo-nguva mamiriro, kumbomira kana kukanzura mabhatani, skrini, nezvimwe.
Cancel Object: Dzimwe nguva unogona kunge wakasiya zvimedu zvakati wandei mumutsara wekudhinda, uye pamwe chimwe chazvo chabva chakanganisa zvimwe. Zvakanaka, neiyi OctoPrint plugin unogona kugadzirisa zviri nyore mamiriro aya. Iwe unongobvisa chidimbu chinonetsa pasina kukanganisa kusimudzira kwevamwe. Mune mamwe mazwi, ichakuchengetedza nguva nemari.
Discord Remote: inokutendera kuti ubatanidze sevha yedu kuDiscord webhu app, kutumira mirairo kune yako 3D printer kuburikidza nebhoti, uye nekudaro zvibate kure. Nenzira iyi, bhoti inoteerera kumirairo uye kuita mabasa akaratidzwa (kutanga kudhinda, kudzima kudhinda, kunyora mafaira eSTL, kutora mufananidzo wekhamera, kubatanidza uye kubvisa printer, nezvimwewo).
Themeify+ Uye hauzodi ruzivo rweCSS.
Print Times Genius: inotibvumira kuona nguva dzekudhinda dzezvikamu nenzira kwayo, sezvo Octoprint's zvimwe zvisiri izvo. Kuti uite izvi, inoshandisa yakakwira kuverenga algorithm pamwe nekudhinda nhoroondo Gcodes kupa chaiyo-nguva yekudhinda nguva.
Mubhedha Level Visualizer: Chekupedzisira, iyi imwe OctoPrint plugin inokutendera iwe kuti ugadzire, kubva kumakongisheni, 3D mesh yemubhedha yekuenzanisa. Chimwe chinhu chinobatsira kana uine sensor yekuyera yakavakirwa mukati meiyo 3D printer, yakadai seBLTouch.
Maitiro ekuisa plugin
Kana iwe uchinetseka kuti ungashandisa sei mapulagi aya muOctoPrint, kuaisa, kana angodhawunirodha, zviri nyore. unotofanira kudaro tevera anotevera matanho kuiisa pane server:
Svika iyo OctoPrint web server.
Enda kune Octoprint Settings chikamu munzvimbo yepamusoro yekurudyi (wrench icon).
Zvino tsvaga iyo Plugin Manager chikamu.
Dzvanya bhatani rekuti Wana Zvimwe.
Octoprint ikozvino inokupa nzira nhatu dzakasiyana dzekuwedzera plugin:
Isa kubva kune yepamutemo plugin repository
Isa kubva paURL
Isa kubva pafaira raiswa
Sarudzo yakanakisa ndeye kushandisa iyo yepamutemo repo, sezvo iriyo yakachengeteka sarudzo uye iyo inokupa iwe yazvino vhezheni yeplugin.
Kana uchinge wasarudza iyo yaunoda, ichaiswa uye uchazvigadzira kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » Octoprint: tonga yako 3D printer kure
Odroid Go: kit yekuvaka yako inotakurika mutambo console